Home Wararka Taliyaha Booliiska Puntland oo magacaabay shan taliye saldhig
Taliyaha Booliiska Puntland oo magacaabay shan taliye saldhig
Taliska Booliiska Puntland S/Guuto Maxamed Cali Xaashi ayaa xalay magacaabay taliyaal saldhig. Taliyaha Saldhiga dhexe ee Caasimadda Garoowe ayaa loo magacaabay Maxamuud Muuse Bile (Fardafuul) halka taliyaha saldhiga galbeedna loo magacaabay Cabdullaahi Cali Wadaad (Qoob).
Taliyaha Saldhiga degmada Eyl oo ka tirsan Gobolka Nugaal ayaa loo magacaabay Siciid Axmed Faarax halka taliyaha saldhiga dhexe ee Boosaaso loo magacaabay Cabdullaahi Yuusuf Cabdullaahi. Taliyaha saldhiga xaafadda Xingood oo ka tirsan magaalada Qardho ee Xarunta Gobolka Karkaar ayaa loo magacaabay Yaasiin Cabdi Aaden.
Previous articleKaligii talis raba in uu bedelo Kaligii talis kale
Next articleGud. Guddiga Doorashada Hirshabelle oo xilka laga qaaday iyo Sababta keentay
Midowga Musharaxiinta oo Waalli ku sifeeyay Go’aanka Farmaajo